रियल म्याड्रिडका च्याम्पियन्स लिग प्रतिद्वन्द्धी, कुन क्लब सँग कस्तो प्रर्दशनको अपेक्षा ? — News of The World
रियल म्याड्रिडका च्याम्पियन्स लिग प्रतिद्वन्द्धी, कुन क्लब सँग कस्तो प्रर्दशनको अपेक्षा ?
संसार न्यूज संवाददाताभाद्र २८, २०७४
२८ भदौ, काठमाडौँ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स रियल म्याड्रिडले आज राती साईप्रसको क्लब एपोलीलाई घरेलु मैदानमा निम्त्याउदै आफ्नो च्याम्पियनस लिगको यात्रा सुरु गर्दै छ । निरन्तर दुई पटक सम्म उपाधि जितेको रियलले लगातार तेस्रो वर्ष समेत उपाधि जित्ने आशाका साथ मैदानमा उत्रिने छ । समुह ‘एच’ मा रहेको रियलले एपोली सँगै बोरुसिया डर्टमन्ड, र टोटेन्हामको सामना गर्ने छ ।
कुन क्लबसँग कस्तो प्रर्दशनको अपेक्षा ?
साईप्रसको क्लब एपोली समहुकै कमजोर प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिएको छ । कमजोर घरेलु लिगको कारण पनि एपोलीलाई समुहकै कमजोर प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
युरोपमा खासै अनुभव नभएको कारण पनि एपोलीलाई कमजोर प्रतिस्पर्धी मान्न् सकिन्छ । तर्सथ एपोलीसँगको खेललाई सहज मान्न सकिन्छ ।
प्रिमियर लिगको उपविजेता टोली टोटेनह्यामले घरेलु लिगमा राम्रो प्रदृशन गरेतापनि च्याम्पियन्स लिगमा भने खास्र राम्रो प्रर्दशन गरेको देखिदैन् । तथापी टोटेन्ह्यामसँग विश्वस्तरीय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ । हेरी केन, डेले अल्ली, एरिक्सन जस्ता खेलाडीहरुले निकै राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । तर्सथ टोटेन्ह्यामलाई बलियो प्रतिस्पर्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्डले चयामिपयन्स लिगमा राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएको छ । गत सिजन पनि रियल म्याड्रिडकै समुहमा रहेको जर्मन टोली डर्टमन्डले रियललाई पछि पार्दै समुहको विजेता बनेको थियो । अझ जर्मन टोलीलले सन् २०१३ को च्यामिप्यन्स लिगको क्वार्टरफाईनलमा रियलको पोष्टमा पाँच गोल बर्साएको थियो । तर्सथ डर्टमन्डलाई समुहकै कठिन प्रतिस्पर्धी मान्न सकिन्छ ।
लालिगामा रोनाल्डोको लोभलाग्दो आँकडा, २८५ खेलमा ३०० गोलको कोशेढुंगा
जब रोनाल्डोले बेन्जेमाको गुन तिरे
रोनाल्डो बिना नै मैदान उत्रेको रियल म्याड्रिडको शानदार जित
प्रदेश सरकारले क्रिकेट खेलाडी करण केसीलाई एक लाख दिने घोषणा
चेल्सी विरुद्ध मेस्सीको ‘सुख्खा स्पेल’ , आज तोड्लान त ‘डेडलक’ ?
नेपालको ब्याटिङ प्रशिक्षकमा उमेश पट्वाल, आज नेपाल आउदै